जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा २ करोड बढीको आवेदन, कतिले भरे ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा २ करोड बढीको आवेदन, कतिले भरे ?
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा २ करोड बढीको आवेदन, कतिले भरे ?
पोष्ट गरिएको असार. १३, २०७८ मा ६:३० मध्यान्ह असार १३, २०७८
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जारी गरेको आईपीओमा तीन दिनमै १२ गुणा बढी आवेदन परेको छ । आज(तेश्रो दिन) बेलुकी साढे ५ बजेसम्म सर्वसाधारमा माग गरेको भन्दा १२.६० गुणा बढी आवेदन परेको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको हो ।
क्यापिटलका अनुसार यो अवधिसम्ममा १५ लाख २८ हजार ४४१ जना आवेदकले २ करोड ३२ लाख ९२ हजार १३० कित्ता सेयर माग गरेका छन् । जबकी संस्थाले सर्वसाधारणमा मात्रै १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ता सेयर माग गरेको छ । आज बिहान साढे १० बजेसम्ममा माात्रै १३ लाख १५ हजार ३१० जनाले संस्थाको सेयर माग गरिसकेका थिए ।
यससँगै इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । उनीहरुले असार ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि, सो अवधिसम्म माग अनुसारको आवेदन
माथिल्लो तामाकोशीको विजुली जोडिएपछि भारतबाट हुने आयात रोकिएला ?